ဝါဒသူခိုးခေတ်သစ်သုသီမ | တရားတော် ကောက်နုတ်ချက်များ
တရားတော် ကောက်နုတ်ချက်များ	မဟာစည်ဆရာတော်
Some Dhamma Blog Links
Dhamma E Books
In အဆုံးအဖြတ်များ/၀ိနိစ္ဆယများ on July 1, 2009 at 5:19 pm
ဓမ္မာစရိယ၊ B.A (Philo) M.A. (Buddhism) ဖြေဆိုသည်
သိလိုရေးနှင့် မေးလျှောက်အပ်ပါသည် –
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်က ထုတ်တဲ့ စာစောင်တစ်ခုမှာ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒဟု ဖတ်ရပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒဆိုတာ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ပတ်သက်ပါသလား။ ဓမ္မ စကြာသုတ်ကို အဲဒီဝါဒနှင့်အညီ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်ဟုလည်း ဆိုပါ သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ‘ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကို ပြန်ရဖို့ ဒါနသီလ ဘာ ဝနာ ကောင်းမှုတွေကို ပြုရင် ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂအကျင့်’လို့ ဆို ထားပါသည်။ တစ်ဖန် ‘အတ္တကိလမထာနု ယောဂအကျင့် ဆိုတာ ရူပ အရုပဈာန် အကျင့်တွေသာ ဖြစ်တယ်’ ဟုလည်း ဆိုပါသည်။ အဲဒီ အဆို တွေ ဟုတ်ပါသလား။
ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂအကျင့် နှင့် အတ္တကိလမထာနု ယောဂ အကျင့်တို့၏ ကျမ်းဂန်ထွက်အစစ် အဓိပ္ပာယ်မှန်ကို သိလိုပါသည်။ ဆောင်း ပါးရေးသူက သူ့အဆို အချို့ကို ‘ပိဋကမှာ တွေ့ပါတယ်’ဟုလည်း ဆိုပါ သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ထိုဆောင်းပါးမှာပင် ‘ဒုက္ကရစရိယာ အကျင့်ဆို တာ ဘယ်လို ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်း ဖြစ် တယ်လို့ အသေးစိတ် ရှင်းပြချက် မတွေ့ရပါဘူး’ ဟုလည်း ဆိုပါသည်။ မှန်ပါသလား။ ဖြေကြားပေးစေလို ပါသည်။
မေးခွန်းပါ အတိုင်းဆိုရင် ဗုဒ္ဓဝါဒအစစ်အမှန်ကို ထင်ယောင် ထင်မှား ဖြစ် စေမယ့် ရေးသားချက်မျိုး ဖြစ်နေလို့ မေးလည်း မေးသင့်တယ်၊ ဖြေလည်း ဖြေဆိုပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ ဗုဒ္ဓသာသနာကို မြတ်နိုး နှစ်သက်သူ ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ သမ္မာအမြင် ရှိထားဖို့ လိုပေလိမ့်မယ်။ ဒါ ဟာ ဖြေဆိုသူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ ဝါဒ တစ်ရပ်ကို တင်ပြမယ်ဆိုရင် သတ္တိ ရှိသင့်တယ်။ ဦးပွ ကိုယ်တိုင် တွေးခေါ် တင်ပြတဲ့ ‘ဦးပွဝါဒ’၊ ကြိုက်ရင် ယူ၊ မကြိုက်ရင် ဆောရီး ပေါ့။ အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဘာလို့ ဗုဒ္ဓဝါဒပါလို့ ပြောနေအုံးမှာလဲ။ အိန္ဒိယမှာ ဗုဒ္ဓဝါဒ ကွယ်ပျောက်ရတာဟာ အဲဒီလို ပူးသတ်ခံရလို့ပဲ။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာကို လေ့လာဖူးရင် ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ ကမ္မဝါဒဟာ ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ဆိုတဲ့ ကာလ သုံးပါးလုံးနဲ့ ပတ်သက်တယ် ဆိုတာကို ရှင်းလင်းစွာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒကိုပဲ လက်ခံတယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓ ဝါဒ မဟုတ်ဘူး။ ဆောင်းပါး ရေးသူရဲ့ ဝါဒပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီဝါဒကို လက်ခံထားသူက ဗုဒ္ဓဝါဒီပါလို့ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဝါဒကို စော်ကားတာပဲ။ ကျုပ်က ဖန်ဆင်းရှင်ကို မယုံတဲ့ ခရစ်ယန် အစစ်ပါလို့ဆိုရင် ခရစ်ယန်ဝါဒကို စော် ကားရာကျသလိုပဲ။
မိမိယူဆချက် ခိုင်လုံဖို့နဲ့ ခွန်အားရှိဖို့ ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်ကို ကိုးကားချင် သပ ဆိုရင် မည်သူမဆို ကိုးကားခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓ ဟောလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်နဲ့ မိမိယူဆချက်ဟာ တစ်ထပ်တည်းတော့ ဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ်ယူ ဆတာက တစ်မျိုး၊ ဗုဒ္ဓဟောတာက တစ်ခြားဆိုရင် ဒီကိုကားမှုဟာ မမှန် ဘူး။ ဓမ္မစကြာသုတ်မှာက အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်အမှန် ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အခြားရှုထောင့်တစ်ခုက သုံးသပ်ပြတယ် ဆိုရင် တစ်ချိန်က လူသေလူဖြစ်ဝါဒီတို့ လုပ်သလို ဓမ္မစကြာလက်သစ်ပဲ ဖြစ်မယ်။
ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ ဓမ္မစကြာသုတ်ထဲမှာ ပစ္စပ္ပန်ကမ္မဝါဒ ဆိုတာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အတွေးအမြင်ကို လုံးဝ မတွေ့မိပါဘူး။ ပစ္စုပ္ပန် ကမ္မဝါဒဆို တာနဲ့ ဓမ္မစကြာသုတ် ဘာမှ မဆိုင်နိုင်ပါဘူး။ ကျုပ်ဝါဒ ကတော့ ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ ကျုပ်ယူဆတာကို ကျုပ်ရေးတာ ဆို ရင် ရှင်းပါတယ်။ ဘာမှ တုံ့ပြန်နေစရာလည်း မလိုပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ ပါရမီဖြည့်မယ့် ဗုဒ္ဓလောင်းလျာဟာ …
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က ‘ဗောဓိÓာဏ်ကို ရပြီးရင် နတ်လူတွေကို ဘဝသံသရာမှ ကယ်တင်မယ်’တဲ့။ ဗုဒ္ဓလောင်းလျာဟာ ဇနီး မယား သမီး သားနဲ့ ကိုယ်အသက်ကိုပါ ပေးစွန့်ရာမှာ ရည်ရွယ်ချက်က ဗောဓိဉာဏ်ကို ရဖို့ပဲ။ တစ်နည်းပြောရင် ဗောဓိဉာဏ်ကို ရဖို့ ရင်းနှီးခဲ့တာပဲ။ ဒါန သီလ ဘာဝနာထဲက ဘာကောင်းမှုပဲ ပြုပြု ရည်ရွယ်ချက်တော့ ရှိကောင်းပါ တယ်။ ‘အလိုရှိရာကို တောင့်တ (ဆုတောင်း)၍ သမဏ ဗြာဟ္မဏတွေကို ထမင်းအဖျော်စတဲ့ လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို ပေးလှူရင် အလိုရှိတဲ့ သူဌေး သူကြွယ် အဖြစ်နဲ့ လူ့ ဘဝ၊ ထိုထက်မြင့်တဲ့ နတ်ဗြဟ္မာဘဝတွေကို ရနိုင်တယ်’လို့ သင်္ဂီတိ သုတ် (ဒီ ၃၊ ၂၁၄)မှာ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် ဟောထားပါတယ်။
သူဌေးဖြစ်ချင်လို့ပဲ လှူလှူ နတ်ဖြစ်ချင်လို့ပဲ လှူလှူ အဲဒီလို လှူတဲ့ အတွက်တော့ လောကလူသားတွေမှာ အနည်းနဲ့အများ ကောင်းကျိုး ရကြ တာပါပဲ။ ဥပမာ ဆေးရုံကြီးတစ်ခု ဆောက်လှူတယ် ဆိုပါတော့။ အလှူ့ ရှင်က အဲဒီကောင်းမှုရဲ့ အကျိုးအနေနဲ့ ဘာပဲဖြစ်ချင် ဖြစ်ချင် ပထမဆုံး အဲဒီက နယ်သူနယ်သား အများကောင်းကျိုး ရတာပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂလို့ ဆိုနိုင်မှာတုန်း။ ‘သူတပါး အကျိုး၊ အများအကျိုး၊ လူသားလောက အကျိုးကို ရည်စူး ဦးတည်ခြင်းရှိ ပြီး’ ကိုယ့်အိတ်ထဲက ပစ္စည်းနဲ့ ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ဘယ်လောက် လှူ ဒါန်းပြီးပြီလဲလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
အခက်အခဲနဲ့ ကြုံနေလို့ စိတ်တွေ ရောက်ရက် ခတ်နေတဲ့ အခါ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီး ပုတီးစိပ်လိုက်တော့ စိတ်ငြိမ်၊ စိတ်ငြိမ်တော့ အတွေးအကြံ ကောင်းတွေ ရပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်လို့ လောကီ ကိစ္စတွေလည်း အောင်မြင်သွားတာပေါ့။ ပုတီးစိပ်တာဟာ ဗုဒ္ဓဝါဒီအဖို့ အောက်ဆုံး အဆင့် ပါ။ အဲဒီကနေ စစ်မှန်တဲ့ ဝိပဿနာအဆင့် ကို တက်သွားနိုင်တာပဲ။ ဒါကို ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂပါလို့ ဘာ လို့ အပြစ်တင်နေမလဲ။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ညီတော် ရဟန္တာကြီး အရှင်နန္ဒ ရဟန်းဝတ်ခဲ့တာဟာ နတ်သမီးတွေကို လိုချင်လို့ပါ။ သာသနာအစ သို့မဟုတ် ဘာသာရေး လုပ်ခါစမှာ အဲဒါလေးတွေတော့ ရှိ တတ်ပါတယ်။ ကာမသုခလ္လိကနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကာမချမ်းသာကိုချည်း ခံစားမနေဘဲ သင့် တင့်တဲ့ အစားအစာ၊ အဝတ်တန်ဆာနဲ့ နေထိုင်စရာတွေကို သုံးဆောင်ပြီး ဝိမုတ္တိသုခကို ရအောင် အားထုတ်နိုင်ဖို့ ကာမသုခလ္လိကာ နုယောဂကို ပယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီအစွန်းကို ပယ်ရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ပါ။ ဒီအကျင့်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်မှန်ကို လယ်တီ၊ မဟာစည်၊ တောင်မြို့စတဲ့ ပိဋ ကတ်အိုးကွဲ ဆရာတော်ကြီးတွေ ဖွင့်ဆိုထားပြီးသားပါ။ ရှာဖွေ ဖတ်ရှုရုံပါပဲ။
‘အတ္တကိလမထာနုယောဂ အကျင့်ဆိုတာ ရူပ အရူပဈာန် အကျင့် တွေသာ ဖြစ်တယ်’ဆိုရင် တက်တက်စင် လွဲတာပဲ။ ကြံကြီး စည် ရာ။ ဒီအတိုင်း ဆက်ရေးရင် ရေးလေ လွဲလေ ဖြစ်နေမှာပဲ။ သူ့အဆို အရဆိုရင် ရူပဈာန် လေးပါးနဲ့ အရူပဈာန် လေးပါးဆိုတဲ့ သမာပတ် ရှစ်ပါးကိုရတဲ့ ရဟန္တာတွေအားလုံး အတ္တကိလမထအကျင့်ကို ကျင့် လို့ ရတယ်လို့ ဆိုရတော့မှာပေါ့။ ဆောင်းပါးရှင်ဟာ အဲဒီ ‘ရုပဈာန် အရူပဈာန် အကျင့်’ဆိုတာကို သိအောင် အရင် လုပ်သင့်တယ်။
ငါးပါး ရှစ်ပါးသီလကို သီလလို့ သာမန်ခေါ်ပြီး ရဟန်းတို့ရဲ့ ပါတိ မောက္ခသံဝရသီလကို အဓိသီလလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဝဋ်အခြေပြု လောကီ သမာပတ်ရှစ်ပါးကို စိတ္တလို့ သာမန်ခေါ်ပြီး ဝဋ်ကထွက်မြောက်တဲ့ လော ကုတ္တရာ သမာပတ်ရှစ်ပါးကိုတော့ အဓိစိတ္တလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကမ္မဿ ကတာပညာကို ပညာလို့ သာမန်ခေါ်ပြီး ဝိပဿနာပညာ မဂ်ပညာ ဖိုလ် ပညာတွေကို အဓိပညာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါက ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ ကျင့်စရာ အနှစ် သာရ သုံးပါးပါ။ အဲဒီအထဲက စိတ္တကို အကြောင်းပြုပြီး အဓိစိတ္တကို ရရှိနိုင် ပါတယ် (ဝဋ္ဋ္ဋပါဒိကာ အဋ္ဌသမာပတ္တိယော ဥပါဒါယ ဝိပဿနာပါဒိကာ အဋ္ဌသမာပတ္တိ-ယော အဓိစိတ္တံ နာမ (အဘိ-ဋ္ဌ ၂၊ ၃၉၅)။
‘ဒုက္ကရစရိယာဆိုတာ ဘယ်လို ကျင့်ခဲ့သုံး နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ အသေးစိတ်ရှင်းပြချက် မတွေ့ရပါဘူး’လို့ ဆိုရင် ဆောင်းပါး ရေးသူဟာ မဟာသီဟနာဒသုတ် (မ ၁၊ ၉၇)၊ မဟာသစ္စကသုတ် (မ ၁၊ ၃ဝ၁) စတာ တွေကို မဖတ်ဖူးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီသုတ် တွေမှာ ဒုက္ကရစိယအကျင့် အကြောင်းကို ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် အသေးစိတ် ဟောကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒ အကြောင်းကို ရေးတော့မယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုင်ရာ ဗဟု သုတ အတော်အတန်တော့ ရှိသင့်တာပေါ့။ ပါဠိတော်ကြီးမှာ တိုက်ရိုက် ပါနေတာပဲ။ ဆောင်းပါးရှင်ဟာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဓမ္မ အစစ်အမှန်ကို တကယ် စေတနာနဲ့ တင်ပြချင်တယ် ဆိုရင် ယောနိသော မနသိကာရ (အသင့်တွေး နှလုံးသား)နဲ့ မူရင်း ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်တွေနဲ့ အဲဒီကျမ်းဂန်တွေကို တတ်သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖွင့်ဆိုထားတာတွေကို အများကြီး ရှာဖွေ လေ့လာ ဖတ်ရှုရ ဦးမယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
‘လူသေသော် လူမဖြစ်လျှင်လ ဘာဖြစ်မှာတုန်း၊ ရွှေပျက်လျှင် မြေထွက်နွယ် အဝင်ပေမို့ တကယ်ပင် ရွှေပြန်ဖြစ်တယ်ကွယ် လောကစံထုံး’ (လူသေလူဖြစ်၊ စာ-၃ဝ၁) …
လို့ ဦးဥက္ကဋ္ဌက ဆိုလိုက်တော့ အဆွယ်ကောင်းတာနဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ ဗဟု သုတ အခံမရှိတဲ့ စာဖတ်သူ အချို့အနေနဲ့ နားယောင်ပြီး မျက်စိလည် စရာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အတော်အတန် ဉာဏ်ရှိခဲ့ရင် ဒီလိုလေး ဆက်ပြီး စဉ်း စားကြည့်လိုက်နိုင်မှာပါ …
‘လူသေသော် လူမဖြစ်လျှင်လ ပါယ်နတ်စစ် နိဗ္ဗူတာ မှန်စွာပ ဖြစ်ထုံး၊ ရွှေနှင့်လူ လုံးလုံးပင် ခန်မတူလို့ စံတမူ မှားရာက မှောက်ပေပေါ့ နာမ်တဆူ ကြားမှာ ပျောက်တယ်ကွယ် သားမျောက် ကတုံး’။ (ဟုတ်တယ်လေ၊ ရွှေမှာက အဆင်းရုပ်ဆိုတဲ့ ရူပက္ခန္ဓာပဲရှိပြီး လူက ရုပ်ရောနာမ်ပါ ခန္ဓာငါးပါး ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဥပမာနဲ့ ဥပမေယျ မဟပ်စပ်တဲ့အတွက် အမှားကြီးမှားတယ်လို့ ဆိုလိုက်တာပါ)။
အဲဒီလို တစ်ချိန်က လူသေလူဖြစ်ဝါဒီတို့လည်း သူတို့ ရေးပြော တာတွေမှပဲ ဗုဒ္ဓဝါဒအစစ်အမှန် ဟုတ်သလိုလို၊ လယ်တီစတဲ့ ဆရာတော် ကြီးတွေရဲ့ အယူအဆတွေက ဗုဒ္ဓဝါဒ အတုအယောင် ဖြစ်နေသလိုလို လုပ် ကြံ ရေးပြောခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးခဲ့သလဲ ဆိုတာတော့ ကာယကံရှင်တွေပဲ သိကြပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓလက်ထက်က ရာဇဂြိုဟ်မြို့သား သုသီမလို့ ခေါ်တဲ့ ပရိဗိုဇ် ဟာ ဗုဒ္ဓဝါဒကို သူ့ရဲ့ တိတ္တိဝါဒထဲမှာ ထည့်ပြီးဟောရင် သူ့တရားနဲ့ သူ့ဝါဒကို လူကြိုက် များမှာပဲဆိုပြီး အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဝါဒီအဖြစ်နဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာထဲကို ဝင် ရောက်ပြီး ရဟန်းဝတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝါဒခိုးဖို့ ကြံစည်သူ သုသီမ ကတော့ ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်နဲ့ တွေ့လို့ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားခဲ့တာကိုး (သံ ၁၊ ၃၄ဝ)။
ဒီလို ဗုဒ္ဓဝါဒကို ခိုးယူတဲ့ ဝါဒသူခိုးသူတွေဟာ ခေတ်အဆက် ဆက်မှာ ရှိတာပဲ။ ရှိလည်း ရှိနေဦးမှာပဲ။ ဗုဒ္ဓဝါဒဖက်က ကြည့်ရင် ဒိလို လူတွေဟာ ဗုဒ္ဓဝါဒကို ရှုပ်ထွေး မှေးမှိန်အောင် ကွယ်ပျောက်အောင် လုပ် နိုင်တာမို့ အင်မတန် ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။
ဝါဒသူခိုး ခေတ်သစ်သုသီမတွေဟာ မိမိရေးတာ ပြောတာကို လူ ကြိုက်အောင်လို့ အလံရှုး ရှဲဒိုးနည်းတွေကိုလည်း အသုံးပြုတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်သာသနာကို ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ ကြပ်ကြပ် သတိထားကြ ပါကုန်။
ဓမ္မာစရိယ၊ B.A (Philo) M.A. (Buddhism) ဖြေဆိုသည် ။
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မသမားတို့၏ မိစ္ဆာအကြံ ကိုသိလိုပါ က http://yatana.freeblog.co.nz/category/freeblogtips/ တွင် ဖက်ရူဆင်ခြင် နိူင်ပါကြောင်း။
« Before စောဒနာတင်သွင်းလွှာ အမှတ် ၁… ဘာသာမဲ့ ရုပ်ဝါဒီများဖြစ်ကြောင်း စောဒနာချက်…(လူသေလူဖြစ်) June 27, 2009 Afterရဟန္တာစစ်တမ်း November 14, 2009 »	Follow Blog via Email
လူသေလူဖြစ် ၀ါဒါနုဝါဒါ ၀ိနိစ္ဆယ
Recent Posts	မိုးညိုဝိနိစ္ဆယမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
စောဒနာတင်သွင်းလွှာ အမှတ် ၁… ဘာသာမဲ့ ရုပ်ဝါဒီများဖြစ်ကြောင်း စောဒနာချက်…(လူသေလူဖြစ်)
Top Posts	မိုးညိုဝိနိစ္ဆယမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	Flickr Photos	More Photos
WordPress.com	C-BOX	SHOUT My Blogs	Ahlataya Blogspot .................................................................................
Notes of Dhamma Blogspot
HIT COUNTER	19,407 hits
Recent Comments	ဝေဒနာသုံးပါးလုံးကြုံ… on ဝေဒနာနုပဿနာတရားတော်ကြီး ပထမပို…	Video